Ha’yad ka digtay Ayax mar kale kusoo fool leh Soomaaliya - Awdinle Online
Hay’adda Cunnada iyo beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobay ee FAO ayaa ka digaysa in wixii ka dambeeya todobaadka labaad ee bisha Diseembar la filayo in koronkoro cusub oo ayax ah lagu arki doono Soomaaliya iyo Itoobiya, iyagoo gaari doona ilaa iyo waqooyiga Kenya.
Koronkoradan ayaa ka dhalatay bay hay’addu leedahay roobabkii ka dhashay duufaantii GATI ee horraantii todabaadkan ku dhuftay meelo ka mid ah waqooyiga Somaliya, taas oo keentay duruufo u saamaxaya ayaxu inuu ku tarmo goobaha ay duufaantu ku dhafatay.
Maxamed Khaalid Cali oo ah sarkaal ka tirsan hay’addaas FAO ayaa sheegay inay ku saleysan tahay saadaasha ay samaysay hay’addiisa in Ayaxa uu sii tartamayo sababo la xiriira duufaanta iyo roobabka.
Waxaa uu sheegay in maalinba maalinta ka dambeeysa in uu Ayaxa kusii baahi karo degaano kale, isla markaana uu baabi’in karo Beero farabadan sidoo kale uu saameyn doono dowladaha deriska la ah Soomaaliya.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay inay muhiim tahay inay iska kaashadaan ka hortaga musiibada ayaxa, Hay’adda FAO, Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed.
Warbixintaan kasoo baxday Hay’adda Cunnada iyo beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobay ee FAO ayaa waxaa ay kusoo aadeeysaa xilli inta badan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya lagu arkay ayax farbadan.
Previous articlelaftagareen oo sheegay in culeys amni ku hayaan Al-Shabaab
Next articleXOG: Qaramada Midoobay oo Amartay in si deg deg ah lagu qabto doorashooyinka labada Aqal